I-twine elandelayo u-Anastasia Volochkova: manje e-shorts nezihlalo ezintathu ...
Akuyona usuku oluhamba ngaphandle kuka-Anastasia Volochkova engabonisi ku-Instagram yakhe isimangaliso esilandelayo. Eduze nesihlahla somuthi wesigodi, emgqeni we-yacht, ezinyathelweni, ekugezeni, ehhishini, emasongweni okugeza, ngezingubo zokugqoka kanye nokugqoka kusihlwa, futhi, nakanjani, emshini we-ballet ...
U-Anastasia Volochkova akavinjelwe umcabango, ngakho-ke abadlali be-ballet sekuyisikhathi eside beba ikhadi lakhe lokubiza, bethola abalingisi nabathandekayo kwi-intanethi.
Namuhla u-Anastasia Volochkova waphinde wanikeza ukudla kwabahlakaniphileyo-abahlakaniphile nezifiso ezimbi-ngokubeka ekhasini lakhe isithombe ezisezintweni ezibonakalayo.
Esithombeni sokuqala, i-ballerina eyaziwayo ihlezi embhedeni, imile e-veranda. Izingubo ku-Anastasia kuphela ama-panties e-transparent ecacile. U-Volochkova uhlanganisa amabele akhe okunethezeka ngebheyi le-teddy. Umlingisi wayekhathele futhi walala amahora ambalwa kule ndawo:
Yeka injabulo ekhaya! Ufika ngemuva kokuhamba indiza, ngengozi walala e-veranda futhi walala amahora angu-6.5.
Umzwelo wesithombe wesithombe awuzange udluliselwe kubhalisile abadansa. Ngokwesiko ku-comments u-Anastasia Volochkova waphinda wagweba:
Ukuqhaqhazela ukulala, ukulala ngengozi, ngenkathi ngengozi bekhohlwa ukuba bagqoke izingubo ..... nalapho umthwebuli wezithombe othembekile evuka njengendawo njalo ngesikhathi
Ngokungazelelwe umuntu uzobukeka, futhi lapha u-Anastasia uhamba nge-veranda. Lesi simemo!
I-Orenburg shawl endaweni engcwele)))))))))))))
U-Anastasia Volochkova uzama ukuhlala ngezihlalo ezintathu
Njengoba evukile ebuthongweni obude, u-Anastasia Volochkova wanquma "ukuqeda" izifiso zakhe ezingalungile ngesinye isici esivelele. I-ballerina emaseneni afanayo obala ehudula ibhere le-teddy lokusula. Kukhona i-prime ballerina eyakwazi ukuhlala phansi ngezihlalo ezintathu ngesikhathi esisodwa, okwabikwa esitokisini sakhe.
Abantu abashisekayo ikakhulukazi, bekhuluma ngezindaba zakamuva ku-instagram, u-Anastasia Volochkova weluleka ukuba ahambe ngendiza yezindiza phezu kwendlu yakhe:
Amantombazane, lena yindlu yami, i-veranda yami nekhasi lami. Ungathandi, ungaboni futhi ungaphenduli. Usalokhu ushayela i-helicopter phezu kwendlu yami .. Futhi ngeke uyibone!
Indoda yangaphambili ka-Anna Sedokova yaphenduka umuntu ongenamakhaya, isithombe
"Indlu-2" iyashaqeka: u-Olga Buzova uhlela ukuthi abahlaziyi baveze ngenxa yesehlukaniso kumyeni wakhe
USvetlana Bondarchuk ujabulela inkululeko, isithombe
U-Lena Lenina uhlela ukuthatha indawo ye-Xenia Sobchak, ngenkathi ehlala esinqumweni
Ubani ozothola ibhola le-UEFA EURO 2016? Ukubheja nokubikezela kwababhuki, ukubikezela kwezingqondo
Ngenxa yendoda yakhe entsha, u-Alena Vodonaeva wenqaba indodana yakhe
I-Maxim Vitorgan igxiliwe ngokuphelele ngenxa yokukhangisa, isithombe
Ikhadi lomuthi kaKhisimusi ngesitayela se-scrapbooking soNyaka Omusha 2016
Umsebenzi nokuphila komuntu siqu
Izibalo ezilula: Ungabala kanjani amakholori ukuze ulahlekelwe isisindo
I-Peking isaladi iklabishi ngezinti zomhlanga
Izindlela zokunakekela izandla zakho ekhaya
Kuthiwani uma umyeni wakho epholile ngokomzwelo?
I-cocktail yase-Classic endala
Kuyini "uLwesihlanu Omnyama" - ukuthengisa okuphelele kuRussia 2015
Sandwich esishisayo nge ushizi